ချစ်ကြည်အေး: ဘာလီ ခရီးစဉ်-၈
မြသွေးနီ Mon Apr 26, 05:14:00 PM GMT+8
ဝေး...ဒီနေ့တော့ မြသွေးနီ ပထမပေါ့..။
အပိုင်း ၉ ကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ဘာလီနီးစ်တွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဓလေ့ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အပိုင်း ၁၀မှာ ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ စိတ်တောင်မကောင်းဘူး။ မချစ်တို့က သံယောဇဉ်တွယ် အောင်
ဒဏ္ဍာရီ Mon Apr 26, 05:43:00 PM GMT+8
ဘာလီခရီးစဉ်မှာ သူတို့လူမျိုးတွေရဲ့ သက်ဝင်ယုံကြည်မှု ကိုးကွယ်မှုတွေနဲ့အတူ အနုပညာ မြောက်တဲ့ လက်ရာတွေကို သိခွင့် မြင်ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမ...။
အင်ကြင်းသန့် Mon Apr 26, 07:30:00 PM GMT+8
စွန်ရောင်စုံလေးတွေကို သဘောကျသွားတယ်...စွန်လွှတ်ချင်စိတ်တောင် ပေါက်လာပြီ... စောစောကသာသိရင် မှာလိုက်ပါတယ်... (လေယဉ်မစီးပဲ စွန်တစ်ယောက်တစ်ခုနဲ့ပျံခဲ့တာမဟုတ်ဘူး ငါ့အစ်မရယ် :D
♥ကိုဇော်♥ Mon Apr 26, 09:12:00 PM GMT+8
ဒီလို ယဉ်ကျေးမှု လေးတွေ စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာ. . .
အခုတော့ အမ ကျေးဇူးနဲ့ တကယ်ရောက်နေရသလိုပါပဲလား..
ဇွန်မိုးစက် Mon Apr 26, 09:55:00 PM GMT+8
ဘာလီနီးစ်တွေရဲ့ ကွဲပြားတဲ့ အရှေ့တိုင်းယဉ်ကျေးမှုဓလေ့တွေ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ ခုလိုပုံနဲ့စာနဲ့တွဲပြီး ရေးသားတင်ပြပေးသွားတဲ့ အစ်မချစ်ကို ကျေးဇူးစ်။း)
TZA Mon Apr 26, 10:54:00 PM GMT+8
Phyo Maw aka pm ^_^ Tue Apr 27, 12:03:00 AM GMT+8
တို့များလည်းအားကျပါရဲ့ ဘာလီ လည်လည်ထွက်ချင်ပါသည်။
မောင်မိုး Tue Apr 27, 12:55:00 AM GMT+8
အော်...ဘာလီ..ဘာလီ နာမည်ကြီးမယ်ဆိုလည်း ကြီးလောက်ပါရဲ့။ ရေခံမြေခံကလည်း ဘူမိနက်သန်ဖြစ်နေတာကိုး။
သက်ဝေ Tue Apr 27, 06:03:00 AM GMT+8
(မမ ခင်ဦးမေ လေသံဖြင့် ပြောသွား...)
Nge Naing Tue Apr 27, 08:59:00 AM GMT+8
အင်တာနက်က ကူးယူဖေါ်ပြပါတယ်ဆိုတဲ့ ဘာလီ မူရင်းလူမျိုးတွေနေတဲ့ အိမ်ပုံစံက မြန်မာပြည်က ကျွန်မတို့နယ်က အိမ်အတော်များများနဲ့ သိပ်ဆင်တယ်။ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်လာတာလည်း တော်တော်စုံတာပဲ ဘယ်လောက်တောင် ကြာခဲ့လဲ။
SHWE ZIN U Wed Apr 28, 12:21:00 AM GMT+8
သူများ သွားချင်အောင် တကယ်လုပ်တယ်..
Anonymous Wed Apr 28, 04:10:00 AM GMT+8
အိမ်ဝိုင်းထဲမှာ နေရာချပေးတာ သဘောကျသွားပါတယ်..
ဥမကွဲ သိုက်မပျက် ပေါ့နော်..
~ဏီလင်းညို~ Thu Apr 29, 09:16:00 AM GMT+8